Home Wararka Safaradda Soomaaliya ee Kenya oo dib loo furay iyo Tarsan oo ka...
Safaradda Soomaaliya ee Kenya oo dib loo furay iyo Tarsan oo ka hadlay
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay si rasmi ah dib ugu furtay safaaradeedii dalka Kenya kaddib muddo lix bilod ah oo ay u xirnayd khilaafkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay dowladda Kenya. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Nairobi, Maxamed Axmed Nuur (Tarsan) oo u warramayey wariyeyaasha ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xiriirka diblumaasiyadeed ee dowladaha dariska ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya.
Tarsan ayaa shaaca ka qaaday in xiriirka labada dal uu mar hoose, marna kor yahay, wuxuuna ku sifeeyey mid marba heer ah. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in aysan marnaba kala go’i karin shacabka labada wadan, isla-markaana uu ka dhexeeyo xiriir ganacsi iyo mid darisnimo intaba.
“Kenya iyo Soomaaliya xiriirkeenu marna waa Hoos marna waa kor laakiin marnaba waxaa kala go’in dadka oo had & jeer isu socodkooda iyo ganacsigooda joogta ah, Soomaalidu waa in ay fahamno in aan nahay dad walaalo ah lagana gudbo khilaafka tirada badan ee soo noqnoqanaya”ayuu yiri Danjire Maxamuud Axmed Nuur oo loo yaqaano (Tarsan).
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xumaaday kadib markii dowlada Soomaaliya ay ku eedeysay dowlada Kenya farogelin inay ku hayso arrimaha gudaha dalka Soomaaliya.
Hase yeeshee dowlada Qatar ayaa dhexdhexaadisay labada dal iyadoo ku guuleysatay inay isku soo dhoweyso labada madaxda labada dal.